ယောရှုသည် 19 (သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835))České uživatelské rozhraní
1 ဒုတိယတကြိမ်စာရေးစာရေးတံပြု၍၊ ရှိမောင်ရှိမောင်အမျိုးသားသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ယုဒယုဒအမွေအမွေမြေအတွင်း ၌ အမွေခံရအမွေခံရကြ၏။
2 သူတို့အမွေအမွေမြေ၌ရှိသော မြို့များဟူမူကား၊ ဗေရ ရှေဘမြို့၊ မောလဒါမြို့၊
3 ဟာဇာရွာလမြို့၊ ဗာလာမြို့၊ အာဇင်မြို့၊
4 ဧလတောလဒ်မြို့၊ ဗေသူလမြို့၊ ဟေမာမြို့၊
5 ဇိကလတ်မြို့၊ ဗက်မာကဗုတ်မြို့၊ ဟာဇာသုသမြို့၊
6 ဗက်လေဗောက်မြို့မြို့၊ ရှရုဟင်မြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်သုံးဆယ်သုံးမြို့မြို့တည်း။
7 ထိုမှတပါး၊ အင်ရိမ္မုန်မြို့မြို့၊ တောခင်မြို့မြို့၊ ဧသာမြို့မြို့၊ အာရှန်မြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ လေးလေးမြို့မြို့တည်း။
8 ထိုမှတပါး တောင်တောင်မျက်နှာ၌ ဗာလတ်ဗေရရာ မတ်မြို့မြို့တိုင်အောင် အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသော မြို့မြို့ပတ်ဝန်း ကျင် ရွာရှိသမျှပါသတည်း။ ဤရွေ့ကား ရှိမောင်ရှိမောင်အမျိုး သားသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရသောအမွေအမွေတည်း။
9 ရှိမောင်ရှိမောင်အမွေအမွေမြေသည် ယုဒယုဒအမျိုးသားသားခံသော အဘို့ထဲက နှုတ်ရ၏။ ယုဒယုဒအမျိုးသားသားတို့အဘို့သည် ကြီး ကျယ်သောကြောင့်၊ သူတို့အမွေအမွေမြေအတွင်း၌ ရှိမောင်ရှိမောင် အမျိုးသားသားတို့သည် အမွေခံရအမွေခံရကြ၏။
10 တတိယတတိယတကြိမ်စာရေးစာရေးတံပြု၍ ဇာဗုလုန်ဇာဗုလုန်အမျိုး သားသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရအမွေခံရကြ၏။ သူတို့ အမွေအမွေမြေအပိုင်းအခြားသည် စာရိဒ်မြို့မှထွက်၍၊
11 အနောက်သို့သွားလျက် မရာလမြို့၊ ဒဗ္ဗရှက်မြို့ သို့၎င်း၊ ယောကနံမြို့ရှေ့မှာရှေ့မှာရှိသော မြစ်မြစ်သို့၎င်း မှီလေ၏။
12 တဖန် စာရိဒ်မြို့မှ နေထွက်နေထွက်ရာအရှေ့မျက်နှာသို့ လှည့်သဖြင့်၊ ခိသလုတ္တာဗော်မြို့၊ ဒါဗရတ်မြို့သို့ ရောက်ပြီး လျှင်၊ ယာဖျာမြို့သို့ တက်တက်လေ၏။
13 ထထိုမြို့မှစ၍ အရှေ့ဘက်ဘက်နားမှာလိုက်လျက်၊ ဂိတ္တ ဟေဖါမြို့၊ အိတ္တကာဇိန်မြို့၊ ရိမ္မုန်မေသောရနေအာမြို့သို့ ရောက်လေ၏။
14 မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်၌လည်း ဝိုင်းဝိုင်းသဖြင့်၊ ဟန္နသုန်မြို့ သို့ရောက်၍ ယိဖသေလချိုင့်၌ ဆုံးလေ၏။
15 ထိုမှတပါး၊ ကတ္တတ်မြို့မြို့၊ နဟာလာလမြို့မြို့၊ ရှိမရုန် မြို့မြို့၊ ဣဒလမြို့မြို့၊ ဗက်လင်မြို့ဗက်လင်မြို့တည်းဟူသော ရွာနှင့်တကွ ဆယ်နှစ်နှစ်မြို့မြို့ရှိသတည်း။
16 ဤရွေ့ကား မြို့မြို့ရွာပါလျက် ဇာဗုလုန်ဇာဗုလုန်အမျိုးသားသား တို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရသောအမွေအမွေတည်း။
17 စတုတ္ထတကြိမ် စာရေးစာရေးတံပြု၍ ဣသခါဣသခါအမျိုး သားသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရကြ၏။
18 သူတို့အပိုင်းအခြားသည် ယေဇရေလမြို့၊ ခေသု လုတ်မြို့၊ ရှုနင်မြို့၊
19 ဟာဖရိမ်မြို့၊ ရှိဟုန်မြို့၊ အာနဟာရတ်မြို့၊
20 ရဗ္ဗိတ်မြို့၊ ကိရှုန်မြို့၊ အာဗက်မြို့၊
21 ရေမက်မြို့၊ အင်္ဂန္နမြို့၊ အင်္ဟဒ္ဒါမြို့၊ ဗက်ပဇ္ဇက်မြို့ ပါလျက်၊
22 တာဗော်မြို့မြို့၊ ရာဟဇိမမြို့မြို့၊ ဗက်ရှေမက်မြို့မြို့သို့ ရောက်၍ ယော်ဒန်မြစ်ယော်ဒန်မြစ်၌ ဆုံးလေ၏။ ရွာနှင့်တကွ ဆယ် ခြောက်မြို့မြို့ရှိသတည်း။
23 ဤရွေ့ကား မြို့မြို့ရွာပါလျက် ဣသခါဣသခါအမျိုးသားသား တို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရသောအမွေအမွေတည်း။
24 ပဥ္စမတကြိမ် စာရေးစာရေးတံပြု၍ အာရှာအမျိုးသားသား တို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရကြ၏။
25 သူတို့အပိုင်းအခြားသည် ဟေလကတ်မြို့၊ ဟာလိမြို့၊ ဗေတင်မြို့၊ အာခရှပ်မြို့၊
26 အာလမ္မေလက်မြို့၊ အာမဒ်မြို့၊ မိရှာလမြို့ပါ လျက်၊ အနောက်မျက်နှာ၌ ကရမေလကရမေလမြို့၊ ရှိဟောရရှိဟောရလိဗ နတ်မြို့သို့ ရောက်လေ၏။
27 တဖန် နေထွက်နေထွက်ရာဘက်ဘက်သို့လှည့်၍ ဗက်ဒါဂုန် မြို့၊ ဇာဗုလုန်ဇာဗုလုန်ခရိုင်၊ ယိဖသေလချိုင့်ကို ရှောက်သဖြင့်၊ မြောက်မျက်နှာသို့သွား၍ ဗေသမက်မြို့၊ နယေလမြို့၊ ကာ ဗုလမြို့၊
28 ဟေဗြုန်မြို့၊ ရဟောဘမြို့၊ ဟမ္မုန်မြို့၊ ကာနမြို့၊ ဇိဒုန်မြို့ကြီးတိုင်အောင် ရောက်ပြီးလျှင်၊
29 ရာမရာမမြို့မြို့၊ ခိုင်ခံ့သောတုရုမြို့တုရုမြို့၊ ဟောသမြို့မြို့သို့ လှည့်လျက်၊ ပင်လယ်ကမ်းပင်လယ်ကမ်းပါးမှစ၍ အာခဇိပ်မြို့မြို့တိုင် အောင် ပင်လယ်ပင်လယ်၌ဆုံးလေ၏။
30 အုမ္မမြို့မြို့၊ အာဖက်မြို့မြို့၊ ရဟောဘမြို့မြို့နှင့်တကွ ရွာပါလျက် နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်မြို့မြို့ရှိသတည်း။
31 ဤရွေ့ကား မြို့မြို့ရွာပါလျက် အာရှာအမျိုးသားသားတို့ သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရသောအမွေအမွေတည်း။
32 ဆဌမဆဌမတကြိမ် စာရေးစာရေးတံပြု၍ နဿလိနဿလိအမျိုး သားသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရကြ၏။
33 သူတို့အပိုင်းအခြားသည် ဟေလပ်မြို့၊ အာလုန်မြို့၊၊ ဇာနန္နိမ်မြို့၊ အာဒမိမြို့၊ နေကပ်မြို့၊ ယာဗနေလမြို့၊ လာကုံမြို့ပါလျက် ယော်ဒန်မြစ်ယော်ဒန်မြစ်၌ ဆုံးလေ၏။
34 တဖန် အနေနောက်မျက်နှာသို့ လှည့်သဖြင့် အာဇနုတ္တာဘော်မြို့၊ ဟုကုတ်မြို့သို့ရောက်၍၊ တောင်တောင် ဘက်ဘက်၌ ဇာဗုလုန်ခရိုင်၊ အနေနောက်ဘက်ဘက်၌ အာရှာခရိုင်၊ နေထွက်နေထွက်ရာဘက်ဘက်၌ ယော်ဒန်မြစ်ယော်ဒန်မြစ်အပိုင်းအခြားရှိ၏။
35 ခိုင်ခံ့သောမြို့များမြို့များ ဟူမူကား၊ ဇိဒ္ဒိမ်မြို့မြို့၊ ဇေရမြို့မြို့၊ ဟမ္မတ်မြို့မြို့၊ ရက္ကတ်မြို့မြို့၊ ဂင်္နေသရက်မြို့မြို့၊
36 အာဒမာမြို့၊ ရာမရာမမြို့၊ ဟာဇော်ဟာဇော်မြို့၊
37 ကေဒေရှမြို့၊ အင်ဟာဇော်မြို့၊ ဧဒြိမြို့၊
38 ဣရုန်မြို့မြို့၊ မိဂဒလေလမြို့မြို့၊ ဟောရင်မြို့မြို့၊ ဗေသ နတ်မြို့မြို့၊ ဗက်ရှေမက်မြို့မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်ကိုးကိုးမြို့မြို့တည်း။
39 ဤရွေ့ကား မြို့မြို့ရွာပါလျက်၊ နဿလိနဿလိအမျိုးသားသား တို့သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရသောအမွေအမွေတည်း။
40 သတ္တမတကြိမ် စာရေးစာရေးတံပြု၍ ဒန်ဒန်အမျိုးသားသားတို့ သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရကြ၏။
41 သူတို့အမွေခံရအမွေခံရသော မြို့များဟူမူကား၊ ဇောရာ မြို့၊ ဧရှတောလမြို့၊ ဣရရှေမက်မြို့၊
42 ရှာလဗ္ဗိန်မြို့၊ အာယလုန်မြို့၊ ယေသလမြို့၊
43 ဧလုန်မြို့၊ သိမနာသမြို့၊ ဧကြုန်မြို့၊
44 ဧလတေကမြို့၊ ဂိဗ္ဗသုန်မြို့၊ ဗာလပ်မြို့၊
45 ယေဟုတ်မြို့၊ ဗေနဗေရက်မြို့၊ ဂါသရိမ္မုန်မြို့၊
46 မေယာကုန်မြို့၊ ရက္ကုန်မြို့၊ ယာဖေါမြို့ရှေ့မှာရှိ သော မြေပါသတည်း။
47 ဒန်ဒန်အမျိုးသားသားရသောမြေသည် ကျဉ်းမြောင်း သောကြောင့်၊ လဲရှမြို့ကို စစ်ချီ၍တိုက်ယူလုပ်ကြံသဖြင့် နေနေရာချကြ၏။ လဲရှမြို့ကို၊ အမျိုး၏အဘဒန်ဒန်ကို အစွဲပြု၍၊ ဒန်ဒန်မြို့ဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်ကြ၏။
48 ဤရွေ့ကား မြို့မြို့ရွာပါလျက်၊ ဒန်ဒန်အမျိုးသားသားတို့ သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရသောအမွေအမွေတည်း။
49 ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုးသားသားတို့သည် မြေမြေတပြင် လုံးကို အပိုင်းအခြားနှင့်တကွ ဝေဖန်၍ အမွေအမွေခံပြီးမှ၊ နုန်၏သားသားယောရှုယောရှုအား အမွေအမွေမြေမြေကို ပေးပေးကြ၏။
50 သူတောင်တောင်းသောမြို့မြို့ ဧဖရိမ်ဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာတောင်ပေါ်မှာ တိမ နဿေရမြို့မြို့ကို ထာဝရဘုရားဘုရားအမိန့်တော်အတိုင်း ပေးပေးသ ဖြင့်၊ သူသည် မြို့မြို့ကိုတည်ထောင်၍ နေနေလေ၏။
51 ဤရွေ့ကား ယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလာဇာ၊ နုန်၏ သားသားယောရှုယောရှု၊ ဣသရေလအမျိုးသားသားတို့တွင် အဆွေအမျိုး သူကြီးတို့သည်၊ ရှိလောရှိလောမြို့မှာ ထာဝရဘုရားဘုရားရှရှေ့ ပရိသတ် စည်းဝေးရာတဲတော်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးနား၌ ဝေပေးသော အမွေအမွေခံ စရာမြေမြေ အသီးသီးပေတည်း။ ဤရွေ့ကား၊ ပြည်ပြည်ကို ဝေဖန်သောအမှု ပြီးလေ၏။
Exploring the Meaning of ယောရှုသည် 19
Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.
This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.
Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was madeapart of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should beaquiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).
The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).
Issachar’s territory wasasmall, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).
Asher means ‘happy’ -adelightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is reallyafeeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).
Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).
Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).
Finally, Joshua himself is given his inheritance,aplace in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995).
The spiritual meaning of receivingaportion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.
Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes representapart of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.